R & D Dhipatimendi - Quanzhou Jinjia Machinery Co., Ltd.
1.Dhijitari inoratidza hydraulic universal yekuyedza muchina inowanzo shandiswa tensile, compression uye kukotamisa bvunzo dzesimbi zvinhu.
2.I (pendulum) kukanganisa muyedzo inoshandiswa kuona kukanganiswa kwesimbi yesimbi uye isiri-yesimbi zvinhu zvichipesana nemhedzisiro pasi pesimba mutoro kuitira kuti utonge zvivakwa zvechinhu pasi pesimba mutoro.
3.Iyo metallographic sampuli yekucheka muchina muchina unobata masimbi esimbi nekushandisa yakakwira-kumhanya kutenderera yakatetepa-ndiro yekugaya vhiri. Inoshandiswa zvakanyanya mu metallographic rabhoritari yekucheka dzakasiyana simbi zvinhu.
4.Inverted metallographic microscope imicroscope pachikuva chiri pamusoro pechinangwa.
Rabhoritari Zvishandiso Nhanganyaya
5.The metallographic mharidzo makorari muchina inoumbwa nezvakakosha zvinhu zvakaita sechigadziko, dhisiki, jira repolishing, chifukidziro chepurasitiki uye kavha. Iyo mota yakatarwa kune hwaro, uye taper sleeve yekugadzirisa iyo polishing disc yakabatana kune mota shaft ne screws.
Iyo yekupukuta machira yakasungirirwa kune iyo polishing disc. Mushure mekunge mota yatenderedzwa nekuchinjika pachigadziko, muyenzaniso unogona kumanikidzwa neruoko kupukuta iyo inotenderera polishing disc. Mvura yakakwenenzverwa yakawedzerwa panguva yekukorobha inogona kudururwa muplate yakaenzana yakaiswa padivi pemuchina wepurasitiki kuburikidza nepombi yekudonha mupureyi repurasitiki rakagadzikwa pachigadziko. Kuvhara uye kufukidza kunodzivirira tsvina uye mamwe marara kuti asadonhe pamucheka wepolishing kana muchina usiri kushandiswa, izvo zvinokanganisa mashandisiro.
6.Metallographic sampuro pre-kukuya muchina, mukugadzirira kwesimbi yesimbigraphic sampuro, pre-kukuya kwesamu iyi yakakosha pre-maitiro usati wapora. Mushure mekutanga-kukwenya muyenzaniso, gadziriso yemuenzaniso inogona kuvandudzwa zvakanyanya.
Efficacy, pre-kukuya muchina yakagadzirirwa kuburikidza akasiyana mativi ekutsvaga uye kuunganidzwa kwemaonero nezvinodiwa zvevashandisi vakasiyana. Kuti usangane nezvinodiwa zvezvimwe zvinhu pre-kukuya, iyo dhayamita yekukuya disc yemuchina uyu yakakura kudarika yezvipfuyo zvigadzirwa zvakafanana, uye kumhanya kutenderera kweiyo yekugaya disc iri zvakare Kusiyana nemidziyo yezvipfuyo, chishandiso chakanakisa kune pre-kukuya sampuli.